Bulshooyinka Itoobiyaanka iyo Eletariyaanka Seattle - HistoryLink.org
Itoobiyaanka iyo Eletariyaanku waxay ku noolaayeen Seatle ilaa dabayaaqadii 1960dii, iyagoo ku bilaabmay arday jaamacadeed. Laga soo bilaabo 1980 ansixintii sharciga qaxootiga ilaa qiyaastii 2000, kumanaan Itoobiyaan iyo Eletariyaan ah ayaa ku soo galay Seatle muhaajiriin iyo qaxooti ahaanba dawlado siyaasadeed oo wax cadaadiya, abaar, iyo dagaal dartood. Horaantii qarnigii kow iyo labaatanaad Itoobiyaanka iyo ELetariyaanku waxay ku yimaadeen Maraykanka barnaamijka Fiisaha Haajiraadda Kaladuwan, kaasoo u oggolaanaya kaadh degganaasho abadi ah muhaajiriinta waxaanu salka ku hayaa nidaam bakhtiyaanasiib ah. 2010, bulshada Seattle ee Itoobiyaanka ah waxa lagu qiyaasay in ka badan 25,000 qof, taasoo ka dhigaysa mid ka mid bulshooyinka Itoobiyaanka ah ee ugu badan Maraykanka. Bulshada ELetariyaanka ee Seattle waxay u dhaxaysaa 6,000 iyo 8,000, taasoo ka dhagaysaya mid ka mida bulshooyinka ELetariyaanka ah ee ugu badan Maraykanka. Labada bulshoba way ku najaxeen Seattle, laakiin sidoo kale waxay waajahaan caqabdo isku mid ah. Kuwan waxa ka mid ah u diyaargaraynta facii horee muhaajiriinta ee gaboobay hawlgabka iyo ku ilaalinta carruurta dugsiga iyo siday u noqon lahaayeen muwaadiniin fiican iyagoo u sii maraya borogaraamaynta dugsiga ka dib ee xarumahooga bulshada. Xarumaha bulshadu waxay bixiyaan barxad bulsheed iyo barnaamijyo badan ooy ka mid yihiin qaar loogu talo galay inay ka caawiyaan ilaalinta hiddaha iy dhaganka. Ururka Wadaagga Bulshada Itoobiyaanka ahi wuu soo dhaweeyaa Itoobiyaanka oo dhan. (Itoobiyaanku asal ahaan way kala duwan yihiin waxaanay ku hadlaan luuqado kala duwan). Ururka Eletariyaanka Seattle-ta Wayni wuxuu u adeega bulshada Eletariyaanka.